UJOSH LUCAS ANGATHANDA 'UKUKHAYA OKUMNANDI EALABAMA' NGOKULANDELELANA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UJosh Lucas ngokuBakho kwe 'Sweet Home Alabama' Sequel: Ndingayenza ngeSibini
(Ityala: Imifanekiso yeTouchstone)
Ngu: Esther Lee 07/18/2018 ngo-4: 35 PM
Ngaba lixesha lokulandelelana okumnandi kwekhaya? Ngoku ka Ikhaya elimnandi laseAlabama umdlali UJosh Lucas , ukuba ukhetho lwaluphezu kwetafile, uya kusayina ngokukhawuleza.
Inkqubo ye- Yellowstone Umlingisi uphumelele izigidi zeentliziyo kwi-comedy yothando ka-2002 ekuboniseni kwakhe uJake Perry, uthando lomntwana olunomdla kunye nomyeni wangaphambili womlingiswa kaReese Witherspoon uMelanie Smooter. Njengendoda ekhokelayo ye-movie eyaziwayo ye-00, uLucas wajongana nombuzo ovuthayo wokulandelelana okunokubakho ngoLwesibini, nge-17 kaJulayi.
Ndingayenza ngomzuzwana, utshilo Intetho . Ndicinga ukuba iya kuba yinto enomdla kakhulu, kwaye ngokucacileyo andazi ukuba iyokuya phi.
Nangona kunjalo, ubume obuntsonkothileyo bobudlelwane bobabini buvula indawo entsha entsha yamathuba. Ngelixa uninzi lwabalandeli be-flick ngoku befumanise ukuba uMelanie noJake kusenokwenzeka ukuba bonwabile emtshatweni, uLucas uthi eso sigqibo asiqinisekanga ncam.
Ndicinga ukuba kungonwabisa kakhulu ukubona ukuba baphi aba bantu babini kunye nabantwana… kwaye baphelela phi bonke abantu, utshilo. Bahleli kunye? Baqhawule umtshato? Ngaba bayakwenza ndifuna ukubuyela kunye? Ndiyathetha, zininzi izimvo ezahlukeneyo… Ndicinga ukuba sonke siyazi ukuba ubomi bude kwaye bunzima kwaye babenobudlelwane obunomdla ukuqala-abalinganiswa ababini.
Ucacisile, ndithetha, inyani yokuba babekunye ukusukela xa babengabantwana, ndingathanda ukubona okwenzekayo kwiminyaka engama-20 kamva.
Kwindawo zokugqibela zebhanyabhanya yantlandlolo, uWitherspoon's Melanie wagqibela eshiya isinqandamathe sakhe (uPatrick Dempsey) kunye nomamakhe onzima (uCandice Bergen) esibingelelweni ethanda ilangatye lakhe langaphambili uJake.
Uxelele uLucas Fikelela ngokuBukhoma kudliwanondlebe olwahlukileyo athe wafikelela kuWitherspoon, ngoku oqhuba eyakhe indlu yokuvelisa, malunga nokulandelelana okunokubakho. Ndide ndafikelela kuReese, kwaye ndiyazi ukuba uReese uthethile ngokunjalo-ngumboniso bhanyabhanya, utshilo uLucas. Ndingayithanda kuba ndingathanda ukubona ukuba aba bantu baphelelaphi okanye bakuphi ngeli xesha ebomini babo.
UWitherspoon ngoku usebenza kwinxalenye yesithathu ye-Blonde esemthethweni, athe wayiqinisekisa kwinyanga ephelileyo ngeendaba zosasazo.
iilokhwe ezimfutshane zemikhono yeendwendwe zomtshato
Izipho zekrisimesi ezilungileyo zomfazi
imifanekiso kamama womtshakazi onxibe iilokhwe
ungatshata kangaphi e-Arkansas
Umama weenwele zomakoti zeenwele ezinde
iindleko zokuqeshisa nge-tux yendlu